Yoga 520 sy 720, ireo fiovana vaovao roa natolotr'i Lenovo | Vaovao momba ny gadget
Manohy miady i Lenovo mba hahazoana tsena mitombo, miresaka momba ny tsena azo ovaina isika, fitaovana sasany mandray ny ampahany amin'ny varotra izay avelan'ny tablette sy PC mijanona miandalana. Mbola manohy mandinika ny fomba hamaliana ny fangatahan'ny mpampiasa vaovao ny orinasa sinoa. , mpampiasa iray niovaova hevitra ary navelany hamorona atiny, mitady fahafaha-manao sy fivezivezena mihoatra ny zava-drehetra. Ho an'izany dia nanolotra ny Yoga 520 sy Yoga 720 vaovao, ireo fiovan'ny Lenovo vaovao izay mikendry ny hanavao ny tsena mifototra amin'ny famaritana anao.
Ary noho io antony io indrindra no izy, satria ny toetra teknika sy ny fampiasa amin'ny fitaovana dia mety hamela antsika hisokatra amin'ny vavantsika raha mijery ireo karazana fitaovana atrehantsika isika.
Nanomboka tamin'ny Yoga 520 izahay, fitaovana tsy latsaky ny 14 santimetatra, zavatra tsy mahazatra amin'ny solosaina finday azo ahodina, miaraka amina vahaolana Full HD (120 × 1080). Mba hamindrana ny ekipa dia hihaona amin'ny taranaka fahafito an'ny Intel Core i7, miaraka amin'ny sasany mahaliana RAM 16GB, izay hampanantena antsika hihaona na dia ireo asa mitaky faran'izay mafy aza eo amin'ny sehatry ny rindrambaiko. Ho an'ny feo, ny marika Harman dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana Dolby Home Theatre. Miaraka amin'ny chassis aluminium ary loko miloko isan-karazany.
Ny Yoga 720 dia hanolotra famaritana mitovy amin'izany, tsy maintsy tadidintsika fa ny efijery 13-inch dia hanolotra antsika 3840 × 2160 px, raha ny kinova 15 santimetatra dia hanolotra antsika 3840 × 2160 koa, ambany hakitroky fa mitovy vahaolana mahaliana. Ny laharam-pandehan'ny processeur sy ny RAM dia hitovy tanteraka.
Raha ny karatra sary, ny maodely 13-inch dia ho avy miaraka amin'ny Intel HD Graphics 620, raha toa kosa ny 15-inch dia manome kely noho ny NVIDIA GTX 1050 hahafaly anay amin'ny famahana azy, miaraka amina andiana mpandahateny sonia JBL ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Yoga 520 sy 720, ireo fiovana vaovao roa natolotr'i Lenovo